नौ महिनामै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल नेपालमा ! - दर्पण संसार
नौ महिनामै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल नेपालमा !
२०७९ बैशाख १३, मंगलबार १५:५५ बजे
काठमाडौं । नेपालमा विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको पाइएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ प्रारम्भ भएदेखि नै सरकारले सवारीसाधन, महँगा विदेशी ब्रान्डका मदिरा, सुनचाँदी र धेरै मुल्यपर्ने ल्याप्टप, मोबाइल सेट लगायतका बस्तुहरुलाई बिलासिताका सामान भन्दै त्यस्ता वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरेको बताए पनि तथ्याकंले गलत सावित गरिदिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बितेका नौ महिना गत चैत मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार आयात रोक्न सरकार असफल देखिएको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको नौ महिनामा ३१ दशमलव ९७ प्रतिशतले आयात बढेको छ ।
यस अवधिमा कुल १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ११ खर्ब ११ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत चैत मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको हो ।
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले सरकारले अनेक उपाय गर्दै आयात घटाउन पहल गरे पनि अझै अपेक्षाकृत रूपमा आयात नियन्त्रणमा नआएको बताए । यसले देशमा तरलता बढाउने र आर्थिक संकट थप चुलिने उनको भनाइ छ । चालू आवको सुरुवाती महिना गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म नेपालले झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । समीक्षा अवधिमा देखिएको यो आयात अघिल्लो आवको भन्दा ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
सो अवधिमा ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार निर्यातको तुलनामा आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटामा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले १० खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड ८३ लाखबराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो । यसैगरी, चालू आवको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३४ दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा १६ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १२ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड २५ लाखबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ५० लाख थान बढी मोबाइल फोन आयात भएको छ । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन गत भदौमा आयात भएको थियो ।